I-Double Room - Ihhotela i-Machupicchu Inn - I-Airbnb
I-Double Room - Ihhotela i-Machupicchu Inn
Aguas Calientes, Cuzco, i-Peru
Indlu encane ibungazwe ngu-Ronald
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Jul 16.
Igumbi labashadile. Inendlu yokugezela yangasese, ideski, i-inthanethi ye-Wi-Fi emakamelweni nezindawo ezihlanganyelwe. Ibhulakufesi lamahhala linikezwa kusukela ngo-5 kuya ku-9 ekuseni. Amakamelo ayahlanzwa futhi abulawe amagciwane nsuku zonke, ashiye yonke into ihlanzekile futhi ifakwe amagciwane. Sinegumbi lokudlela elikhulu lebhulakufesi nelokuphumula, kanye nezindawo zokungcebeleka ezingu-2, kuyilapho zilinde ihora lokuya esiteshini sesitimela.
Indlu inezitezi ezi-4, ezisabalalisiwe; esitezi sokuqala yilapho kukhona igumbi lokudlela kanye negumbi lokulinda. Esitezi sesibili, sesithathu nesesine, yilapho amagumbi atholakala khona, yilena ndlela esinemibono eyinhlanhla ngayo ngendawo yemvelo yehhotela. Ngaphambili sinepaki elihle lokushisa ilanga futhi siseduze nebhuloho lothando, lapho imibhangqwana ishiya i-padlock, njengophawu lwenyunyana.
ubusuku obungu-7 e- Aguas Calientes
Indawo esikuyo iphephe kakhulu, umuntu angakwazi ukuhamba ngokuthula okukhulu, siseduze nesiteshi sesitimela, isiteshi sebhasi, iziphethu ezishisayo, izindawo zokudlela lapho umuntu enganambitha ukudla kwendawo futhi azulazule emigwaqweni yedolobha. Sitholakala kumamitha angu-2000 ngaphezu kolwandle, okwenza indawo ibe nesimo sezulu esimnandi kakhulu, ukuhambahamba ngemibono emihle kakhulu.
Igama lami nginguRonald futhi ngokuvamile ngihlala ngisehhotela endaweni yokwamukela izivakashi, ukuze ngikwazi ukukwamukela futhi ngikuchazele zonke izimanga ongazivakashela ngesikhathi uhlala.
Hlola ezinye izinketho ezise- Aguas Calientes namaphethelo